गृहमन्त्रीज्यु , अब पनि चितवनका एसपीलाई कार्बाही नहुने ? – ebaglung.com
गृहमन्त्रीज्यु , अब पनि चितवनका एसपीलाई कार्बाही नहुने ?
२०७६ भाद्र ८, आईतवार ११:५५	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
प्रेम सुनार, बुटवल २०७६ भदौं ८ । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा दुनियाँ मै त नभनौं सम्भवत नेपाल मै नभएका, नसुसनिएका प्रकरण माथीका अनेक प्रकरणहरु बाहिर आएका छन । शालिकरामको मृत्यु नहुँदै उनी मर्दैछन भन्ने कुरा सम्भवतः एउटा गिरोहलाई पहिला नै थाह भएको हुन सक्छ । जुन कुरा उनी मृत हुनु अघि आफैले रेकर्ड गराएको भनिएको र बाहिरिएको भिडियो प्रकरणले संकेत गर्दछ ।
कुनै कानुन ब्यवसायी वा प्रहरीको अनुसन्धान अधिकृतले मात्र होईन सर्वसाधरण नेपाली समेत कल्पना गर्न नसक्ने उक्त भिडियो प्रहरीबाट सिधै सञ्चार माध्यममा पुग्नु भनेको सुनियोजित योजना भनेर सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेका समर्थकहरुले भनिरहेका छन ।
चितवनको कंगारु होटलको घटना स्थलमा पहिला प्रहरी पुग्यो वा अरु ? यो कुरा चितवन जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दानबहादुर मल्लले प्रहरी संगठन मार्फत नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ । यदि स्वय प्रहरीले नै आफन्तलाई तत्काल उक्त भिडियो उपलब्ध गराए कै हो भने त्यहाँका प्रहरी प्रमुख एसपी मल्ल पुर्णतः गै्ह जिम्मेवार हुन ।
जवकी कुनै चोरी मुद्धा अदालतमा फैसाला भएको महिनौ सम्म पनि नगद र जिन्सी प्रहरीले दिदैन पीडितलाई दिदैन भने अनुसन्धान कै क्रममा रहेका प्रमाणहरु बाहिर चुहाउनुले एसपी मल्ललाई सुरु मै विभागमा तानेर स्पष्टीकरण लिनु पर्ने र त्यहाँ अर्को प्रहरी प्रमुख खटाएर अनुसन्धान थाल्नु पर्ने हो ।
जवकी उनी सुरु मै त्यस भिडियो प्रकरणले विवादमा आई सके । त्यस्ता विवादित अधिकारीबाट कस्तो अनुसन्धान होला भनेर आशा राख्ने ? त्यति ठुलो गल्ती गरेका एसपी मल्लले झन ठुलो गल्ती दोहोराएका छन ।
उनकै कमाण्डमा रहेको त्यसै प्रहरी कार्यालयमा हिरासतमा रहेका सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले स्टुडियोमा जस्तै कडा र चर्को स्वरमा बोलेर त्यतिञ्जेल सम्म अर्का पत्रकार टेकनारायण भट्टराईसंग अन्तवार्ता दिई रहँदा के हेरेर बसियो ?
यसमा डिउँटीमा रहेका प्रहरीको कम्जोरी देखाएर मात्रै पुग्दैन, एसपी मल्ल जिम्मेवार हुनै पर्दछ । त्यो त बरु अन्तर्वार्ता मात्रै लिईयो र प्रहरी प्रशासनलाई ठुलो चुनौती पनि दिईयो ।
यदि हिरासतमा रहेका ब्यक्तिलाई भेट्न जाने मानिसलाई त्यसरी नै खुल्ला छाडिन्छ र प्रहरीले वास्तै गर्दैन भने कुनै ब्यक्ति रवि लामिछानेलाई आफन्तको नाममा पुगेर कुनै विषालु पदार्थ वा अन्य ज्यान लिने कुराहरु पनि त दिन सक्थ्यो ?
यस विषयमा किन गम्भीर भएनन एसपी मल्ल ? के यहि हो डिउँटी ? नेपाली जनताले त यस्तो प्रश्न गर्दै आएका छन भने प्रहरी संगठन र उनै जनताका प्रतिनिधी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ( वादल ) ज्युले जनताको यो सावल उठाउन पर्ने कि नपर्ने ? को यो सानो बिषय हो ?
अनुसन्धान कै ठुलो प्रमाण भनेर रवि लामिछाने विरुद्धको भिडियो प्रहरी बाटै बाहिरिनु, त्यही सवाल कडा रुपमा नेपाली जनताले उठाई रहेका बेला फेरी हिरासत मै रहेका ब्यक्तिको अडियो अन्तवार्ता बाहिरिनु भनेको एसपी मल्लको गैह्र जिम्मेवारीको यो भन्दा ठुलो प्रकाष्ठ र प्रमाण के हुन सक्छ ?
त्यस भिडियो बाहिर ल्याउनु पुर्व एक चोटी नायिका श्रीसा कार्कीको आत्मादहनको घटना र अन्य त्यस्ता महिलाहरुले ज्यान हाल्नु परेका घटनालाई किन स्मरण गरिएन ? रवि लामिछाने , युवाराज कँडेल प्रति रिस–ईवी थियो र दोहरीमा फोहरी खेल स्वभाविकै पनि होला र त्यो भिडियो सार्वाजानिक गरियो तर एउटी नारी जो शालिकरामकी प्रेमीका भनिएको छ जसको नामै किटाईएको त्यो भिडियो किन राखियो ?
यो गम्भीर बिषय प्रति सम्वन्धित निकाय अहिले सम्म किन मौन ? यसरी एक पछि अर्को ग्रै्रह्र जिम्मेवारी देखाउने एसपी मल्लले जे गरे पनि हुन्छ ? रवि लामिछाने विरुद्ध राज्य नै लागेको के उनले संकेत गर्न खोजेका हुन ? कानुन ब्यवसायी विष्णुप्रसाद वलाल भन्छन–‘ चितवन प्रहरीको यो ठुलो कम्जोरी हो ।
हिरासतमा रहेका ब्यक्ति रवि लामिछानेको अडियोमा अन्तवार्ता आयो भन्ने सुनेको छु , त्यो हो भने त प्रहरी माथी ठुलो चुनौती र उनीहरु कै ठुलो कम्जोरी हो । ’
नाम नबताउने सर्तमा प्रहरी कै एक अधिकारी भन्छन हिरासतमा रहेका ब्यक्तिको सुरक्षाको जिम्मा लिने र सबै कुरामा निगरानी राख्ने जिम्मेवारी प्रहरीको हो । हिरासतमा रहेका रवि लामिछाने संग त्यतिञ्जेल अन्तवार्ता लिदा डिउटीमा खटिएका प्रहरीले के हेरेर बसे ?
उनलाई कार्बाही गर्ने त्यहाँका प्रमुखले हो भने उनलाई स्पष्टीकरण लिने र कम्जोरी ठहरिए कार्वाही जिम्मा उनी भन्दा माथाील्लो निकायले हो । ’ यसरी प्रहरीको गैर जिम्मेवारीका कारण हिरासत वा कारागारमा रहेका धेरै मानिसहरुले ज्यान हालेका छन् ।
शालिकराम मृत्यु प्रकरणमा सुरु देखि नै हत्या , आत्मा हत्याको छिनोफानो गर्नु अघि नै सिधै आत्माहत्या भनेर प्रहरीले नै भन्नु , भिडियो बाहिरन दिनु र हिरासत मै अन्तवार्ता ?
यसले सिंङ्गो प्रहरी संगठनको छवि नै धमिलाएकोा छ । यसर्थ नेपाल प्रहरीको छवि जोगाई राख्न पनि एसपी मल्ल माथी पहिला कार्बाही हुनु पर्छ र नयाँ शिराबाट शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु प्रकरणको छानविन हुनु पर्दछ ।
कसैले बोले कै भरमा अरु कसैलाई दुख दिने हो भने अब यो देशका ठुला बढा जो कोही बच्ने छैनन । रवि लामिछानेलाई फेरी पनि म्याद थप्ने दुख दिने काम भयो भने ख्याल गरियोस यो देशमा तेश्रो जनआन्दोलन सुरु हुने छ ।
जनता आफैले रवि लामिछानेलाई सुरक्षा दिने छन, उनका फ्यानहरु भन्छन प्रत्येकले महिनाको पाँच सयका दरले उठाए पनि रवि लमिछानेलाई हामी सरकारका मन्त्रीहरुलाई भन्दा बढि सुरक्षा दिन तयार छौं र अदालतले चाहेको बेला उनलाई बुझाउन पनि तयार छौं तर अनाबश्यक दुख दिन पाईदैन । यस सम्वन्धमा चितवनका प्रहरी प्रमुख मल्ल र त्यहाँका सिडियोको प्रतिकृया माग्दा उनीहरु दुबै जनाले फोन उठाएनन ।
कार्यकर्तालाई एकतावद्ध हुँदै पार्टी निर्माण र परिचालनमा जुट्न आग्रह !
मौलिक लोक कला र संस्कृतीको संरक्षण गर्न फलेवासमा भजन प्रतियोगिता सम्पन्न !
२०७६ पुष १२, शनिबार २०:३४
सञ्चारकर्मी सरु सुनारको जीवनः मलेसियाको मजदुरी देखि अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड सम्म
२०७६ भाद्र ९, सोमबार १५:५१
शलिकराम पुडासैनीको झोला क्यामरा खोई ?